आँसुको बिजनेस | मझेरी डट कम
editor — Sat, 08/10/2013 - 20:55
श्रावण २५ -
मेरा आँखा पिरा भइसकेका थिए । मेरी श्रीमती पटक-पटक कौतूहलपूर्वक मेरा आँखामा हेरिरहेकी थिइन् ।
किराना पसलेले उनलाई एक हप्ताको समय दिएर पाँच किलो चामल र केही तरकारी उधारो दिएको थियो । भर्खरै जन्मेको राजबहादुर उनका दूध खाएर अघाउँथेन । उसका लागि भनेरै दैनिक एक पोका दूधको भार थपिएको थियो ।
मेरो जागिर चट् भइसकेको थियो । मेरो काम १० बजेदेखि ४ बजेसम्म आँसु एक्सपोर्टमा गएर रुने थियो । मसित ४५ जना अरू पनि थिए । कोही जनयुद्धपीडित, कोही अभावले पीडित त कोही आफ्नै सन्तानले पीडित । हामी अँध्यारो कोठामा बसेर आफ्ना पीडा सम्भि“mदै रुन्थ्यौं । कम्पनीले दिएको सलाईको जस्तै 'आँसु संग्रह'को पित्तलको बट्टामा आँसु खसाल्थ्यौं । जसले आँसुको टेम्पेचर ठीक बनाइराख्थ्यो । आँसु दर्ता गथ्र्यो र फर्किन्थ्र्यो । जब कसैको आँखाबाट आँसु निस्किन छाड्थ्यो, कम्पनीले अवकाशपत्र थमाउँथ्यो । मलाई लाग्थ्यो, आँसु त हो नि जति पनि आइहाल्छ । तर, म गलत रहेछु । एक दिन मेरा आँखाबाट पनि आँसु तप्किन छाडे । हप्ता पन्ध्र दिनमा मात्र तप्किन्थे । आँसु तप्किन छाडेपछि, 'आँसु एक्सपोर्ट' कम्पनीले मेरो हातमा अवकाशपत्र थमाइदिएको थियो ।
म बेरोजगार भएको थिएँ ।
मेरी श्रीमतीले पनि त सप्पै आँसु बेचिसकेकी थिइन् । मलाई थाहै नदिई पनि बेचेकी थिइन् । अहिले त आँसु निकाल्न खोज्यो कि उनका आँखा सुनिन्छन् । धमिलो देख्छु भन्छिन् ।
अस्ति भर्खरै ससुराली जाँदा ससुराले मरेको आवाजमा भनेका थिए, 'ज्वाइँ साप, तपैले त मेरी छोरीका सप्पै आँसु बेचेर खानुभएछ ।' मेरो आधा मुटु त्यही क्षण आधा ढुंगा भएको थियो । अभावले घाँटी अठ्याउन थालेपछि, हामीले दैनिक खाद्यान्नको लिस्ट छोट्याएका थियौं ।
मैले भनें, 'मैले सुनेको, दूध चियाले ग्यास्टिक बढाउँछ रे !'
'ए त्यै भएर होला, दूध चिया पियो कि मेरो पेट ढुस्स हुन्थ्यो,' श्रीमतीले शिर हल्लाउँदै भनिन्, 'ग्यास्टिकले रैछ । भो अब दूध चिया नपिऊ है ।' दूध चिया सहिद भयो ।
मेरी श्रीमती दूध चिया पिएर हुर्केकी थिइन् । दूध चियाको लती पनि थिइन् । उनले सजिलै दूध चिया आफ्नो दैनिकीबाट हटाइन् । यसरी हामी कारण खोज्थ्यौं र हरेक दिन केही न केही कुरा दैनिक जीवनबाट हटाउँथ्यौं ।
खानाको लिस्ट छोट्याउँदा छोट्याउँदै बिहान खायो, साँझको चिन्ता । साँझ खायो, बिहानको चिन्ता हुन थालिसकेको थियो । हुँदाहुँदा मलाई होस् या मेरी श्रीमतीलाई पसलमा देख्यो कि मोटो पावरदार चस्मा लगाएको साहुजीले अमिलो अनुहार लगाउन थालिसकेको थियो ।
हामीलाई कहिलेकाहीं नाबालक सन्तान राजबहादुरको आशा लाग्थ्यो । एक दिन ऊ पनि पीडाले रुनेछ । र, उसको आँसुबाट पनि पैसा आउनेछ ।
'आज पनि तपैको आँसु झरेन भने बर्बादै हुन्छ,' श्रीमतीले भनी ।
'चिन्ता नगर । मेरो हृदय बटारिन थालिसकेको छ । साँझसम्म आँसु र्झछ, र्झछ,' मैले उनलाई सान्त्वना दिएँ ।
'पानी कम खाएर हो कि आँसु नआएको ?' श्रीमतीले भनिन्, 'एक गिलास पानी ल्याइदिम् ?'
मैले मुन्टो हल्लाएँ । मलाई यस्ता कुरामा विश्वास लाग्दैनथ्यो, तर जीवन उधो गतिमा लागिसकेपछि सप्पैसप्पै कुराको विश्वास लाग्दो रैछ ।
श्रीमतीले पानी ल्याइन् । एकै सासमा पिउँदै भनें, 'मलाई एक्लै छाडिदेऊ । म फेरि कोसिस गर्छु ।'
श्रीमती पलङको छेउमा निदाइरहेको राजबहादुरलाई पछ्यौरा ओढाएर बाहिर निस्किइन् । झ्यालको अलिकति उघ्रेको पर्दाबाट मसिनो घामको धारभित्र पसिरहेको थियो । पर्दा टमक्क लगाएँ । पलङछेउ धुम्धुम्ती बसें । सुस्केरा काढें । र, अतीतको घना जंगलमा पसें ।
भोकभोकै काठमान्डुका गल्लीहरूमा रन्थनिएको सम्झें । कोखा चस्किँदा एउटा बु्रसेट किन्ने दुई रुपैयाँ नहुँदा सिरकको छेउलाले कोखा बाँधेर सुतेको सम्झें । दुवै मृगौला बिग्रेर अँगारझैं काला भएर बितेका बाबु सम्झें । गाउँमा मेरै बाटो हेरेर बसेकी बूढी आमै सम्झें । नौ महिनाअघि आफ्नो अन्तिम आँसु पठाइदिएकी थिइन् । मैले ११ सय ३६ रुपैयाँमा बेचेको थिएँ । अहिले त उनका आँसुका नशा सुकिसकेका छन् ।
म यस्तो सन्तान थिएँ, जसले आमाका आँसुहरू पनि बेचिसकेको थिएँ ।
मैले ती सारा स्मृतिहरू सम्झें, जसले मलाई एकान्तमा रुवाउँथे । बर्बरी आँसु खस्थे ।
मैले त सारा स्मृतिका आँसुहरू सस्तो मूल्यमा बेचिसकेको रैछु । अब त मसित आँसु झर्ने स्मृतिहरू पनि बाँकी रैनछन् ।
'आँसु एक्सपोर्ट' कम्पनीको अँध्यारो कोठामा बसेर मैले सारा स्मृतिहरूबाट आँसु निचोरिसकेछु ।
म त साह्रै गरिब भइसकेछु ।
हृदय फेरि बटारियो । आँखाहरू भत्भताए । आँखाका कुनाहरू चिसिएजस्तो भो । म भक्कानिएँ, मसित अब बेच्नलाई एक थोपा आँसु पनि छैन ।
अचानक माकुराको जालमा अल्भिmएको पानीको थोपा बिस्तारै तन्किँदै भुइँतिर खस्न लागेझैं एउटा आँसुको थोपा मेरा आँखामा देखा पर्‍यो । मैले हतारहतार 'आँसु संग्रह'को बट्टा आँखा नजिक लगें । खुसीले मेरा हातहरू बिस्तारै काँपिरहेका थिए ।
कमिलाले मरेको पुतलीलाई जोड लगाएर धेकेलेझैं, मेरो हृदयले आँसुको डल्लो धकेल्न थाल्यो । आँसुको डल्लो आँखाको डिलमा आयो । फुत्त बट्टामा खस्यो । मैले बट्टा बन्द गरें । जुरुक्क उठें ।
मैले बट्टालाई सिरानमुन्तिर जतनसाथ राखें । र, दैलो उघारें ।
एकैछिनमा श्रीमती देखापरिन् र सोधिन्, 'भयो ?'
मैले नाकबाट बगेको पातलो सिंगान पाखुराले पुछें । मुस्कुराएँ, 'भयो । यसपालि त नम्बरी आँसु नै झरेजस्तो छ ।'
'टियर्स बिजनेस'को ठूलो ढोकाबाट भित्र पसें । हुन त, काठमान्डुमा आँसु खरिद गर्ने कैयौं कम्पनी खुलेका थिए । म आफैंले काम गरेको आँसु एक्सपोर्ट पनि थियो । तर, मलाई विश्वास टियर्स बिजनेसकै लाग्थ्यो । मालअनुसारको दाम पाइन्थ्यो ।
रिसेप्सनमा सुख्खका आँसु मात्रै झर्लान् जस्ती कल्कलाउँदी युवती उभेकी थिई । उसको ठीक पछाडि भित्तामा ठूलो पोस्टर टाँसिएको थियो । पोस्टरमा अंग्रेजी फिल्मकी हिरोइन मुस्कुराइरहेकी थिई । उसका कानमा टलक्क टल्किएका झुम्काहरू थिए । पोस्टरमा देवनागरी लिपिमा लेखिएको थियो, 'नेपाली महिला शान्तिमायाका आँसुबाट बनेका झुम्काहरू ।'
त्यसकै छेउमा पत्रिकाको न्युज कटिङ् ठूलो बनाएर टाँसिएको थियो । मैले हतारमा पढ्दा थाहा पाएँ- नेपाली आँसुको माग संसारभरि रैछ । नेपाली आँसुबाट झुम्का, घडीका सुई, दाँतमा चमक ल्याउने पेस्ट, औंठी के के बन्दो रैछ, के के । हलिउडकी हिरोइनले झुम्का लागइदिएपछि, शान्तिमायाका आँसुहरूको माग असाध्यै बढेको छ रे ।
आँसु हुन् त शान्तिमायाको जस्तो ।
'के ट्वाल्ल परेर हेरिरहेको ?' रिसेप्सनमा बसेकी केटीले चिट दिंदै भनी, 'ल्याबमा गुणस्तर देखाउनुस् ।'
म छत्तीस नम्बरमा परेछु ।
अफिसमा भीडभाड थियो । मानिसहरू आँसु राखेको बट्टा बोकेर यताउता दगुरिरहेका थिए । कोही आँसुको पैसा कुनामा बसेर गनिरहेका थिए । कोही कुनाका कुर्सीमा बसेर बट्टामा आँसु झार्ने कोसिस गरिरहेका थिए । म भीड छल्दै गुणस्तर मापन शाखाको झ्यालमा पुगें । लामो लाइनको पछिल्तिर गाँसिएँ ।
मेरो अघि दुब्लो मानिस उभेको थियो । उसका कपालले कानलाई छोपेका थिए । मैलो सर्ट लगाएको थियो । गोडामा चप्पल । आँसुको बट्टा समाइरहेका उसका हात काँपिरहेका थिए । उसले पछाडि फर्केर मलाई हेर्‍यो । मैले पनि हाँसेजस्तो गरें ।
'दुख्खको आँसु ल्याउनु भा कि सुख्खको ?' उसले सोध्यो ।
'दुख्खको,' म हाँसें ।
'मेरो पनि दुख्खकै हो,' ऊ पनि हाँस्यो, 'सुख्खको आँसु त सपनै भो । एकपल्ट सुख्खको आँसु झरेको भए, टन्टै साफ हुन्थ्यो ।'
'अस्ति मेरी घरबेटी बूढीले अमि्रकाको नातिसित फोनमा कुरा गरिछन् । सुख्खको आँसु खसिहालेछ । बेचिछन् र हातभरि पैसाको मुठो बोकेर आइथिन्,' उसले अलिकति अगाडि सर्दै भन्यो, 'सुख्खको आँसु त धनीलाई मात्रै आउने है ।'
म आधा ओठ हाँसें ।
'आफ्नो त आँसु नै आउन छाडेको छ,' उसले अमिलो अनुहार बनाउँदै भन्यो, 'हिजो कब्जियतको रोगी कनेझैं कन्दाकन्दा एउटा थोपो झर्‍यो । डाक्टरले पनि अब धेरै आँसु नझार्नु, आँखालाई असर गर्छ । यस्तै पारा हो भने अन्धो नै हौला भनिसकेको छ । क्यार्नु, आँसु नबेची खानै पुग्दैन ।'
म चुप रहें । म पनि आँसु बेचेरै खाइरहेछु ।
आँसुको बिजनेस सुरु भएको केवल १० वर्ष त भएको छ नि । १० वर्षमा मैले जीवनकालभरिको आँसु बेचिसकेको छु । भविष्यमा साँच्चिकै रुनुपर्‍यो भने मसित आँसु हुने छैनन् । म बुच्चो रुनेछु ।
लाइन सर्दै गयो । मेरो अघि उभिएको दुब्लो मान्छेले सिसाको झ्यालको सानो प्वालमा आँसुको बट्टा छिरायो । एकैछिनमा उसको हातमा रसिद थियो । उसले हतारहतार पढ्यो । उसको अनुहार कालोनिलो भयो । ऊ करायो, 'मेरा आँसु असली हुन् । नम्बरी हुन् । १६ क्यारेटको लेख्दिनी ?'
'कनेर निकाले हो अँासु । काँबाट नम्बरी हुन्छ ?' भित्रबाट आवाज आयो ।
'माँसाला ठग्नी ?' ऊ करायो, 'म मेरा आँसु चिन्दिनँ ?'
उसको हल्लाखल्ला सुनेर दुई बलिष्ठ गार्ड आए । उसको पाखुरा समातेर लतार्दै लगे । ट्वाल्ल परेर हेरिरहेका मानिसहरू फेरि चल्मलाए । मैले सिसाको प्वालबाट बट्टा छिराएँ ।
मुखमा हरियो मास्क र टाउकोमा हरियो टोपी लगाएको मानिसले बट्टा समायो । मैले प्वालबाट देखें, भित्र ठूलै प्रयोगशाला थियो । सिसाका टल्किरहेका भाँडाहरू थिए । कुनै जगजस्ता । कुनै हुक्काजस्ता । कुनै पाइपजस्ता ।
उसले आँसुको थोपा हुक्काजस्तो भाँडामा राख्यो । त्यहाँबाट निलो धूवाँ निस्कियो । त्यसपछि उसले कलमजस्तो सिसाको टुक्रा हुक्काजस्तो भाँडामा राख्यो । एकछिनमा बाहिर निकाल्यो । सिसाको टुक्रा आँखा नजिक लगेर नियाल्यो । ठ्याक्कै, डाक्टरले ज्वरो नापेजस्तो ।
उसले शिर हल्लायो । र, टेबुलको रसिदमा कलम दगुरायो । मेरो आँसु पास भयो । प्याज काट्दा निक्लेका आँसु यहाँ पास हुँदैनन् । उसले र्फम मतिर र मेरो आँसु राखेको हुक्काजस्तो भाँडा भित्रतिर बढायो ।
मैले रसिद हातमा आउनेबित्तिकै हतारिँदै पढे । त्यहाँ लेखिएको थियो- शुद्ध आँसु । चौबीस क्यारेट ।
आज आँसुको रेट के छ ? म सूचना टाँसिएतिर दगुरेझैं हिँडे । भित्तामा ३२ इन्चको टीभी टाँसिएको थियो । त्यहाँ, एयरपोर्टमा छुट्ने प्लेनका नाम लेखेझैं, विभिन्न नाम र रेट डिस्प्ले भइरहेका थिए । मानिसको घुइँचो थियो । म मानिसको भीड ठेल्दै अघि बढे र पढ्न थालें ।
खुसीको आँसुको भाउ बढेको रैछ ।
चौबीस क्यारेटको भाउ उस्तै रैछ ।
बाइस क्यारेटको भाउ घटेछ ।
प्याज काटेर निस्केको आँसु अझैं ब्यान्ड रैछ ।
ठूल्ठूला अक्षरमा विशेष सूचना थपिएको थियोे, संविधान बनेन भनेर रोएका सभासदका आँसुहरू ब्यान्ड गरिएको छ । ती मूल्यहीन आँसु हुन् । म भीडबाट बाहिर निस्कें ।
क्यास काउन्टरतिर बढ्नै लागेको थिएँ, कसैले हात च्याप्प समायो । लेखक चिन्तक उदास पो रहेछ । घ्याम्पोजस्तो भुँडी निस्किएको । सर्टको पाकेटमा लहरै रातो, हरियो र निलो डट्पेन राखेको । मलाई आफ्नो कथा भन् किताब लेख्छु भनेर हैरान पार्छ । म जहिले आउँछु, उसलाई यतै देख्छु । उसले देख्ला कि भनेर डराउँछु । देखिहालेछ ।
'भाइ, धेरैपछि रोयौ कि के हो ?' उसले मेरो हात समात्दै कुनातिर लग्यो ।
'हजुर,' म हाँसें ।
'अनि तिम्रो कथा कहिले सुनाउने ?' सोधिहाल्यो ।
'सुनाउँला नि सर, कुनै दिन ।'
'त्यसो नभन भाइ, मलाई तुरुन्तै कथा सुनाऊ । म फटाफट लेखेर छापिहाल्छु,' चिन्तक उदासले मेरो दायाँ काँध सुम्सुम्याउँदै भन्यो, 'किताबमा सूचना पनि हाल्छु, यो किताबले तपाईंलाई यत्ति धेरै रुवाउनेछ कि आँसु बेचेरै तपाईं लखपति हुनुहुनेछ ।'
'मेरो कथा पढ्दै अरू रोएर मलाई के ?' म बिच्किएँ, 'म आफैं रुन सकिरहेको छैन ।'
चिन्तक उदास गम्भीर भयो । मैले कुरा मोड्न सोधें, 'अनि तपैंचैं कति रुन सकेको ? म जहिले पनि आँसु बेचिरहेकै देख्छु ।'
'म त दिनदिनै रुन्छु भाइ ।'
'साह्रै पीडा छ हो तपाईंसित ?'
'छ नि । बाईसवटा किताब निकाले, कतै कुनै चर्चा छैन, रोको रोयै गर्छु ।' उसले मलीन अनुहार लाउँदै भन्यो, 'अस्ति मिडियाले साह्रै हेप्यो भनेर रोएँ । हिजो नयाँ लेखकको चर्चा भएको सुनें, रोएँ । म दिनदिनै रुन्छु भाइ ।'
बोल्दाबोल्दै चिन्तक उदासका आँखा टिल्पिलाए । कति सजिलै आँसु आएका ? उसले हतारहतार बट्टा आँखा नजिक लग्यो । उसका आँसु तप्किनै लागेका थिए, म सुत्त भागें ।
क्यास काउन्टर अगाडि भीड थियो । म थपिएँ । मानिसहरू रसिदसहितको हात काउन्टरभित्र पसाउँथे । बाहिर निकाल्दा हातभरि पैसा हुन्थ्यो ।
लाइन चिप्लेकीराको गतिमा अघि बढिरहेको थियो । मेरा अघिल्तिर दुई मानिस मन्द गतिमा कुरा गरिरहेका थिए ।
'तीन महिनाअघि मेरैअघि आँसु बेचेर गको थियो एकजना । अस्ति पत्रिका हेरेको त उसैको फोटो देखें । उसका आँसुले त घडीका सुई बनेछन् । र, त्यै घडी कम्युनिस्ट नेता टुकारामले किनेछ । अझ अन्तर्वार्तामा भनेछ, यो घडी लाएपछि मेरो टाइम ठीक चलिरहेको छ ।' मेरो अघिल्तिर उभिनेले सुनाइरहेको थियो, 'त्यसपछि त त्यो आँसु बेच्नेको चर्चैचर्चा । उसको आँसु किन्न कैयौं कम्पनी गाउँमै पुगेछन् । अगि्रम पैसा दिएछन् । बिचराले भनेजति आँसु निकाल्नै सकेनछ । कम्पनीले मुद्दा हालेछन् । बिचराको त उठिबासै भएछ ।'
'है, आँसुलाई पनि लक नै चाहिने रैछ,' अर्कोले च्व च्व गर्‍यो, 'लक हुनेका आँसु काँ काँ पुगिसके । आफ्ना आँसु त मात्र बाइस क्यारेट ।'
'के च्व च्व गरिरा, नारायणजी,' पहिलोले भन्यो, 'हाम्रा आँसुले त टुथपेस्ट बनेका छन् । त्यसैले माझेर त होला, नेताहरूका दाँत सेता भाका । हाहा ।'
'ए नेता भन्दा पो याद आयो । अस्ति जुल्फी नेता टीभीमा रोएका थिए नि,'
'त्यो आँसु बेचे र ?'
'होइन, देशको नाममा डोनेसन दिएछन्,' दोस्रोले भन्यो, 'भनेछन्, एउटा श्रीपेच बनाउनू, अनि त्यसमा मेरो आँसु जडान गर्नू ।'
मलाई राजनीतिक कुरा मन परेन । ध्यान अन्ततिर मोडें । मानिसहरूलाई लाइन लाग्दा अल्छी नलागोस् भनेर काउन्टरको सोझैमाथि भित्तामा ठूलो टीभी जडान गरिएको थियो । त्यहाँ आँसुबाट बनेका गहनादेखि टुथपेस्टसम्मका विज्ञापन पालैपालो आइरहेका थिए । टुथपेस्टको विज्ञापनचैं एकैपल्टमा याद हुने खाले थियो ।
मुस्कान हुन्छ धाँसु,
केको लाज, के को धक
हाँस्नुस् मुसुमुसु ।
यी गहनादेखि टुथपेस्टसम्मका चिजहरू हामी आँसु बेच्नेहरूका लागि थिएनन् । ती त केवल आँसु खरिद गर्न सक्नेहरूका लागि मात्र थिए । कम्पनीहरू सस्तो मूल्यमा आँसु किनेर महँगोमा बेच्थे । सिंगापुर र अमेरिकातिर पठाउँथे ।
हामी काठमान्डुमा बस्नेहरू त आफ्नो आँसुको मूल्य ठीकठीकै पाउथ्यौं । तर, दुर्गम गाउँमा बस्नेहरू त खुबै ठगिएका थिए । आँसुका दलालहरू गाउँ गाउँ पुग्थे, एकदम सस्तो मूल्यमा गाउँभरिको आँसुको किन्थे र काठमान्डुमा महँगोमा बेच्थे । मेरै गाउँको रूपसागरले बेलैमा आँसुको बिजनेस चिन्यो, गाउँगाउँमा गएर आँसु किन्यो । अहिले उसको के छैन, घर, गाडी, बैंक ब्यालेन्स ।
काउन्टरमा मेरो पालो आयो । मैले रसिद देखाएँ । काउन्टरको मानिसले मेरो रसिद हेर्दै क्याल्कुलेटर थिच्न थाल्यो । एकैछिनमा क्याल्कुलेटरको लाम्चो स्त्रिmनमा देखियो, १९६२ । उसले मेरो हातमा १९ सय ६० रुपैयाँ र एउटा चुइगम थमायो ।
'भित्र जान मिल्दैन,' गार्ड कराइरहेको थियो ।
'मेरो गर्दन छिनाले छिनाल । तैंले रोकेर रोकिन्नँ,' दुब्लो कायाको मानिस कराइरहेको थियो । झुप्प दाह्री जुँगाधारी उसले थोत्रो कालो कोट र मैलो दौरा-सुरवाल लगाएको थियो । शिरमा ढाकाटोपी थियो, निधारनेर उधि्रएको । उसले पिठ्युँमा मैलो झोला बोकेको थियो । जुत्ताभरि धूलो जमेको थियो । कपडाको हो कि छालाको पत्तो पाइनँ । ऊ भित्र पस्न खोजिरहेको थियो । तर, गार्डले उसको पाखुरा समाइरहेको थियो ।
'म त्यो रणेलाई नभेटी जान्नँ,' त्यो मानिस कराइरहेको थियो । 'ह्या कुनै रणेले काम गर्दैन भनेको,' गार्ड कराइरहेको थियो, 'कस्तो अटेरी हो ।'
गार्डले घिच्चाउँदै उसलाई ढोका बाहिर पछारिदियो । उसले पहिला पुठ्ठाले भुइँ टेक्यो, अनि घुच्चुकले । ऊ पछारिएको देखेर मसँगै ढोकाबाहिर निस्किएका मानिसहरू ऊतिर दगुरे ।
त्यो मानिस बिस्तारै उठ्यो । शरीरमा लागेको धूलो टक्टकायो । उसका अगाडि 'टियर्स बिजनेस'को भीमकाय ढोकातिर हेर्दै प्याच्च थुक्यो र जोडले करायो, 'एई रणे, हाम्रा आँसु फिर्ता दे ।'
उसको आवाज छेउछाउका ठूल्ठूला बिल्डिङमा ठोक्किँदै हरायो । र, ऊ बेस्मारी हिक्का छाडेर रोयो । मैले पहिलोपल्ट आँसुविहीन रुवाइ देखें । बुच्चो रुवाइ । उसको अनुहार सुकेको पातजस्तो थियो । उसका ओठ कानसम्म च्यातिएका थिए । निधार गाँठो परेको थियो ।
उसको नाम जुद्धबहादुर रैछ । पश्चिम नेपालको दुर्गम गाउँबाट आएको । रणेले काठमान्डुबाट गएर सारा गाउँलेका आँसुहरू जम्मा पारेछ । काठमान्डुमा लगेर बेच्यो भने टन्नै पैसा आउँछ भन्ने आस देखाएछ । जुद्धबहादुरलाई साक्षी बनाएर काठमान्डु ल्याएछ । सारा गाउँलेले जुद्धबहादुरको विश्वासमा आँसु पठाएका रैछन् । रुनुजति रोएर । रुँदारुँदै थाकेर ।
गाउँलेहरूलाई आशा थियो, जति रुनु छ, अहिले नै रोऊ, जुद्धबहादुर काठमान्डुबाट फर्केपछि, खुसी नै खुसी आउँछ ।
हिजो साँझ जुद्धबहादुर नयाँ बसपार्क आइपुगेका रैछन् । रणेले बसपार्क नजिकैको थोत्रो होटलमा राखेछ । राति कति मीठा मीठा कुरा गरेर सुतेका थिए उनीहरू । बिहान उठ्दा त छैन, रणे । र, छैन, जुद्धबहादुरको झोलामा जतनसाथ राखेको आँसु ।
हे दैव, रणे त सारा आँसु चोरेर भागेछ । रणे टियर्स बिजनेस पुगेको होला भनेर कसैले भनिदिएछ । उनी खोज्दैखोज्दै आइपुगेका रैछन् । उनी टियर्स बिजनेसको ढोकासम्म रोइरहे । कराइरहे । उनको आर्तनाद रणेले सुनेन, या सुनेर पनि आएन, थाहा छैन । रणेलाई कसैले चिनेको पनि छैन ।
हुन त, धेरैको आँसु चोरेर धेरै रणेहरूले काठमान्डुमा बंगला बनाएका छन् । ती आँसुहीन आर्तनाद सुन्दैनन् ।
'म अब गाउँ कसरी जाऊँ ?' जुद्धबहादुर रोइरहे, 'मैले सारा गाउँको आँसु हराएँ । गाउँलेले मैले नै बेचेर खाएको ठान्नेछन् ।'
अब जुद्धबहादुरले रुँदै सप्पै कथा भने पनि, गाउँलेहरूले पत्याउने छैनन् । किनभने, उनीहरूलाई जुद्धबहादुरको रुवाइ झुठो लाग्नेछ । यदि साँच्चिकै रोएको हो भने उनका आँखामा आँसु खोइ त ?
पीडाको साक्षी केवल आँसु मात्र रहेछ ।
मेरो ज्यान थररर काँप्यो । म कोठातिर दगुरे । श्रीमती मलाई नै कुरेर बसेकी रैछन् । मलाई देख्नासाथ मुस्कुराइन् । मैले पैसा उनको हातमा राखिदिएँ ।
'म किराना पसलको उधारो तिरेर आउँछु,' उनले भनिन्, 'क्यै ल्याइदिऊँ तपैंलाई, क्यै खानुहुन्छ ?' मैले मुन्टो यताउता हल्लाएँ । श्रीमती बाहिर निस्कनै लागेकी थिइन्, उनले ढोकानेर उभेर भनिन्, 'आज त अचम्म भो । छोरो रोको रोयै गर्‍यो । भोकको पीडाले त रोएको होला, उसका आँखाबाट पनि केही थोपा आँसु झरे । मैले बट्टामा राखेकी छु । सिरानमुन्तिर ।' यत्ति भनेर उनी रमाउँदै गइन् ।
मैले सिरानमुन्तिरबाट बट्टा झिकें । त्यहाँ राजबहादुरका दुई थोपा आँसु थिए । चौबीस क्यारेटका । मोतीझैं टल्किरहेका । मैले आनन्दले निदाइरहेको राजबहादुरको अनुहार नियालें । ऊ निद्रामै मुस्कुराइरहेको थियो ।
बट्टा समातिरहेका मेरा हात बिस्तारै काँपे । मैले सोचें, राजबहादुरका पनि आँसु बेच्न थाल्ने हो भने हाम्रो पेट उसकै आँसुको भरमा रहनेछ । र, उसले बलजफ्ती रुनुपर्नेछ । र, एक दिन साँच्चिकै रुने बेला ऊसित आँसु हुनेछैनन्, जुद्धबहादुरकोझैं । चाहिएको बेला आँसु किन्न कहाँ सकिन्छ र ?
म आफ्नो नाबालक छोराको आँसु बेचूँ कि नबेचूँ ?
राजबहादुर निद्रामै झस्कियो र बेस्मारी रुन थाल्यो । उसका आँखाका चेपचेपमा छिपछिप आँसु देखा परे । मैले ती आँसु कान्छी औलाले छोएँ ।
र, उसका आँसुमा चुम्बन गरें ।
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण २६ १०:५३